सुन्नुभाको छ नाङ्गै खाना खाने रेष्टुरेन्ट ? छैन भने हेर्नुहोस यहाँ रेष्टुरेन्टका कर्मचारीले पनि नांगै सेवा दिन्छन् – TAJA KHAWAR
सुन्नुभाको छ नाङ्गै खाना खाने रेष्टुरेन्ट ? छैन भने हेर्नुहोस यहाँ रेष्टुरेन्टका कर्मचारीले पनि नांगै सेवा दिन्छन्
November 7, 2018 Taja Khawar एजेन्सी 0
बजारीकरण र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको चरमरुपभन्दा फरक नपर्ने एउटा उदाहरणको रुपमा लण्डनको बुनयादी रेष्टुरेन्टलाई लिन सकिन्छ ।
लण्डनको केन्द्रमा रहेको अग्लो टावरहरुमध्येको एक दि सेयर्डबाट केहि गल्ली पार गरेपछि पुगिने यो रेष्टुरेन्ट लण्डनको पहिलो नाङ्गो रेष्टुरेन्ट बन्न पुगेको छ । यो रेष्टुरेन्टमा ग्राहकले बाँसले बारिएको सानो कोठामा बाँसकै टेबुलमा नांगै साथीसँग बसेर अग्र्यानिक खाना खान पाउँछन् ।
बाहिरबाट हेर्दा यो रेष्टुरेन्ट खासै भव्य देखिँदैन , झ्यालहरु बन्द गरेर भित्र अँध्यारो पारिएको छ । तर मैनवत्तीको मधुरो उज्यालोमा युवायुवती नांगै खाना खाइरहेका हुन्छन् । त्यतिमात्रै होइन रेष्टुरेन्टका कर्मचारीले पनि नांगै सेवा दिइरहेका हुन्छन् । तलको भिडियो हेर्नुहोस । केके भयो रबिलाइ ।
सो रेष्टुरेन्टमा खाना खानका लागि ४६ हजार मानिस प्रतिक्षाको सूचिमा छन् जुन तीन महिनासम्मको लागि हो ।त्यहाँभित्र सेल फोनमा कुरा गर्न र कुनै तस्बीर लिन पाइँदैन । एक सेट डिनरको एक सय यूरो तिर्नु परेको एक ग्राहकले बताए ।
सेयर गरि लक्ष्मीजीको आराधना गर्नुहोस, रङ्गोली बनाउने यस्तो छ सरल तरिका हेर्नुहोस विधि सहित